Sacuudiga oo gabdhihiisa u billaabaya horyaal kubadda cagta ah - BBC News Somali
Sacuudiga oo gabdhihiisa u billaabaya horyaal kubadda cagta ah
Dumarka Sacuudiga ayaa sanad ka hor loo oggolaaday inay gelaan garoomaha.
Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa billaabi rabta tartan kubadda cagta ah oo gaar u ah gabdhaha, laba sano kadib markii dumarka dalkaasi loo oggolaaday inay u daawasho tegi karaan garoomada ciyaaraha.
Horyaalka gabdhaha ayaa lagu dheeli doonaa garoomo ku yaalla caasimadda Riyaadh iyo laba magaalo oo kale.
Tallaabadan ayaa kamid ah isbedallada uu Sacuudi Carabiya ku sameynayo Dhaxal-Suge Maxamed bin Salmaan, dalkaasi oo sanado badan ahaa mid bulshadiisu waxyaabo mamnuuc ka yihiin.
Hase yeeshee dadka u ololeeya xuquuqda haweenka ayaa sheegaya inay weli dhiman yihiin waxyaabo badan oo ay tahay in laga qabto xoriyadda dumarka.
Mas'uuliyiinta Sacuudiga ayaa sheegay in tallaabadan cusub looga gol leeyahay sidii sare loogu qaadi lahaa ka qeybgalka haweenka ee isboortiga.
"Daah-furka horyaalkan ayaa sare u qaadaya ka qeybgalka dumarka ee ciyaaraha kala duwan, waxaana uu kordhin doonaa in si wanaagsan loo aqoonsado guulaha ay haweenka ka gaaraan ciyaaraha," ayuu sheegay xiriirka ciyaaraha ee Sacuudiga.
Haweenka Sacuudiga ayaa bishii January 2018 loo oggolaaday inay geli karaan oo ay u daawasho tegi karaan garoomada kubadda cagta, waxaana isla sanadkaasi ay Boqortooyada meesha ka saartay sharci dumarka u diiddayay inay gawaarida kaxeeyaan.
Sanadkii la soo dhaafay, amar ka soo baxay Boqortooyada ayaa meesha looga saaray sharci dhigayay in haweenka Sacuudiga aanay dibedda u safri karin muxram la'aan iyo in dumarka aanay ragga la fariisan karin maqaayadaha.
Hase yeeshee in kastoo ay dowladda tallaabooyinkaasi qaaday, ayaa haddana haween dhowr ah oo u ololeeya xquuqda dumarka lagu xiray dalkaasi.